BABETT နဲ့အတူ ပြည်တွင်းအစားအစာများကို ဆင်နွှဲခြင်း | MyFood Myanmar
BABETT နဲ့အတူ ပြည်တွင်းအစားအစာများကို ဆင်နွှဲခြင်း
အားလုံးပဲမဂ်လာပါနော်..ဩဂုတ်လ ၃၁ ရက်၊ ရန်ကုန် – အစားချစ်သူတို့အတွက် Babett Eatery & Bar မှ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ မီနူးကို စက်တင်ဘာ ၁ ရက်အင်္ဂါနေ့ မှာ စတင်ရောင်းချတော့မှာဖြစ်လို့ ပြက္ခဒိန်မှာ ခုပဲ မှတ်လိုက်ကြစို့နော်!
Babett ရဲ့ အသစ်စက်စက် မိတ်ဆက်ပေးထားတဲ့ စိတ်ဝင်စားဖွယ် ဟင်းလျာများကို အရသာရှိစွာ သုံးဆောင်ရန် ပြည်တွင်းဒေသထွက် အစားအစာများကို မြေထဲပင်လယ် နဲ့ ပြင်သစ်စတိုင် လွှမ်းမိုးထားသော ဟင်းလျာများအဖြစ် တစ်ချိန်တည်းတွင် ပြင်ဆင်ထားလျက်ရှိပါသည်။
မပျက်ရင် မပြင်နဲ့ ဆိုတဲ့ ဆိုရိုး စကားရှိသော်ငြားလည်း အထူးသဖြင့် F&B လောကတွင် တစ်ခါတစ်ရံတွင်အချို့သောအရာများသည် ပြောင်းလဲမှု လိုအပ်ကြပါသည်။ Babett ကလည်း အသစ်တဖန် ပြန်လည်သက်ဝင်ဖို့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပြည်တွင်း ထုတ်ကုန်များနဲ့ ဖန်တီး ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ ဟင်းလျာ များကို မီနူးအသစ်ဖြင့် တိုးမြင့်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
Babett ရဲ့ လူကြိုက်များတဲ့ ပီဇာ၊ pastas နဲ့ အသားကင် စသည်တို့မှာ ယခု မီနူးထဲတွင် ကျန်ရှိနေဆဲ ဖြစ်သော်လည်း ထူးခြားပြီး အရသာရှိလှတဲ့ ဟင်းပွဲအသစ်တွေကိုလည်း မြည်းစမ်းကြည့်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။
Executive Chef Xavier နှင့်သူ၏အဖွဲ့မှ အထူးပြင်ဆင်ထားသော မီနူးအသစ်သည် ယုံကြည်စိတ်ချရသောဒေသခံလယ်သမားများ ရဲ့ မြန်မာပုစွန်များ၊ မကွေးကျွန်းဆွယ်မှ လတ်ဆတ်သော ငါးများသာမက ဒေသထွက် စိုက်ပျိုးထားသော အောဂန်းနစ် ဟင်းသီးဟင်းရွက် များကိုသာ ရွေးချယ်ပြီး ချက်ပြုတ်သွားမှာဖြစ်ပါသည်။
Chef Xavier မှ လယ်သမားများနှင့် ထိတွေ့ဆက်သွယ်မှုများ ရရှိခဲ့သောသူ၏အတွေ့အကြုံကို ဤသို့မျှဝေသည် “ ဒီလို လှပတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံတွင်းနေထိုင်ရလို့ ကုန်းတွင်းနှင့်ပင်လယ်နှစ်မျိုးလုံးမှအရည်အသွေးပြည့်ဝတဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းများကို ရရှနိုင်တဲ့ နိုင်ငံလည်းဖြစ်သောကြောင့် ကျွန်တော် နဲ့ ကျွန်တော်အသင်း အတွက်တော့ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး အပိုင်းကို ကူညီထောက်ပံ့ပေးဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဒေသခံထုတ်လုပ်သူများနှင့်လက်တွဲကာ Babett မီနူး အသစ် ထုတ်လုပ်ခြင်းဖြင့် ပါဝင်သောဟင်းအမယ် ပစ္စည်း များကို ပိုမို ထင်ပေါ်စေရန်အတွတ် ရည်ရွယ်ပါတယ်။ “
Chef Xavier အဖွဲ့မှ ချက်ပြုတ်သော ဟင်းပွဲအသစ်များမှာ –
ကိုယ်တိုင်လုပ် မီးခိုးကျက်တိုက်ထားသော ဆယ်လ်မွန်ငါးကို သံပုရာမလိုင်၊ဆီစိမ်ထားသော ဒေသထွက် ခရမ်းချဉ်သီး နဲ့ ဂျပန် soy-yuzu ဆောစ့် နဲ့ တွဲဖက်စားသုံးနိုင်သော ဟင်းလျာ
Tuna Tartare လို့ ခေါ်သော တူနာ ငါးစိမ်းသုပ် ကို ထောပတ်သီး၊ ပင်မှည့်သီး နဲ့ ကိုယ်တိုင်လုပ် သံပုရာ Chantilly တို့ဖြင့် တွဲဖက်စားသုံးနိုင်သော ဟင်းလျာ
လတ်ဆတ်သောဒေသခံအော်ဂဲနစ်ထွက်ကုန်များကိုသာ အသုံးပြုထားသော သက်သတ်လွတ်ဟင်းလျာများ နှင့်
Chef Xavier ရဲ့ signature ဖြစ်တဲ့ Lime Tart, သံပုရာ ဒိန်ခဲပေါ်တွင် အီတာလျံ meringue တင်ထားပြီး ချိုချဉ် အရသာကို ပေးစွမ်းနိုင်သော အချိုပွဲ
Babett ၏ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲမှု ဒေသခံလယ်သမားများနှင့်ထုတ်လုပ်သူများအားထောက်ပံ့ရန် ပေးထားသောကတိကဝတ်များနှင့်အညီ ပြင်ဆင်ထားသော menu အသစ်သည် လတ်ဆတ်သောပြည်တွင်းထုတ်ကုန် များနှင့် တဖန် ပြန်လည် ဆင်ယင် ထားပါသည်။ နေ့လည်စာ၊ ညစာ မှ စ၍ အပတ်စဉ် ရှိတဲ့ အထူး အစီအစဉ် တွေနဲ့အတူ စားသောက်ဆိုင်ထဲမှာပဲ စားစား၊ အပြင် terrace မှာပဲ စားစား အားလုံးအတွက် ရွေးချယ်စရာ အစားအစာတော့မီနူးထဲတွင် အမြဲရှိသည်။
အပတ်စဉ် ရှိတဲ့ အစီအစဉ်သစ်များ
မိတ်ဟောင်းမိတ်သစ်များအတွက် စားစရာ၊ သောက်စရာ၊ ရွေးချယ်စရာတွေ ပိုများအောင် အပတ်စဉ်အစီအစဉ်သစ်များကို Babett အဖွဲ့သားများမှ ထုတ်ဖော်လိုက်ပါသည်။
တနင်္လာနေ့တိုင်း ကြိုက်ရာ အရသာနဲ့ရွေးနိုင်သော မီတာတစ်ဝက် ပီဇာကို ၁၂၀၀၀ ကျပ် ဖြင့် ရရှိနိုင်သော အစီအစဉ်
အဂါနေ့တိုင်း သူငယ်ချင်း တွေနဲ့ ရှယ်စားလို့ရတဲ့ ဝက်နံရိုးကင် ကို ၉၀၀၀ ကျပ်၊ အဝသောက် ဘီယာပါ ထပ်ပေါင်းရင် တစ်ယောက်ကို ၆၀၀၀ ကျပ် သာရှိသော အစီအစဉ်။ ညနေ ၅ နာရီ မှ ၉ နာရီအထိ
အချိုပွဲများဟာ အိမ်မက်ချိုတွေကို မက်စေပါတယ်! နေ့စဉ် နေ့လည် ၂ နာရီမှ ၅ နာရီ အတွင်း ဘယ်အချိုပွဲပဲမှာမှာ ၁၀% လျှော့ဈေးရရှိနိုင်သော အစီအစဉ်
တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်း Babett ရဲ့ executive Chef မှ2courses ကို ၂၅၀၀၀ ကျပ် ( သို့ )3courses ကို ၃၅၀၀၀ ကျပ်တန် Sunday Roast ဖြင့် တည့်ခင်း ဧည်ခံ သော အစီအစဉ်
Babett Eatery & Bar weekly promotions ကို ကြည့်ရှူရန် : https://bit.ly/2Dak4NU
Babett Eatery & Bar menu အသစ်ကို ကို ကြည့်ရှူရန်: https://bit.ly/32AdVD5
အရည်အသွေးမြင့် ပုံများကို ရယူဒေါင်းလော့ဆွဲရန် : https://bit.ly/34AGrY4
ဖွင့်ချိန် – နေ့စဉ် နံနက် ၁၁ နာရီမှ ည ၁၀ နာရီ အထိ
အမှတ် ၅ ၊ အလံပြဘုရားလမ်း၊ ရန်ကုန်၊ မြန်မာ။ ဖုန်း +95 (0)1 824 3639
Babett Eatery & Bar အကြောင်း
၂၀၁၇ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ (၇)ရက်နေ့တွင် Hotel G Yangon ၏ မြေညီထပ်တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သော Babett Eatery & Bar သည်ရန်ကုန်မြို့ရှိ သမာရိုးကျစားသောက်ဆိုင်များနှင့် မတူဘဲ ဆန်းသစ်ဖန်တီး ထားသော နေရာ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ရန်ကုန်မြို့၏ မြို့လယ်ခေါင်တွင် တည်ရှိကာ စားသုံးသူ ဧည့်သည် (၁၄၀) ခန့်ဝင်ဆံ့ပြီး မြေထဲ ပင်လယ်ဒေသမှ နာမည်ကျော် အချက်အပြတ်များဖြင့် ဖန်တီးထားသော အရသာစုံလင်သည့် ဟင်းလျာများကို ရရှိနိုင် မည်ဖြစ်သည်။ မည်သူမဆို ဘီယာ၊ ဝိုင်နှင့် ကော့တေးလ် အမျိုးမျိုးအပြင် ကျန်းမာရေး နှင့်ညီညွတ်သော ဥရောပ အစားအစာများကို သုံးဆောင်ရင်း တစ်နေ့တာ စိတ်ညစ်စရာများကို ဖြေဖျောက်နိုင် တော့မည်ဖြစ်ပါသည်။
R&B Lab အကြောင်း
R&B Lab သည် အာရှနှင့် အမေရိကန်တစ်ခွင်တွင် နောက်ဆုံးပေါ် ခေတ်မီ အဆင့်မြင့် လူကြိုက်များသော စားသောက်ဆိုင်များနှင့် အဖျော်ယမကာ ဘား များကို အောင်မြင်စွာနှင့် ထူထောင်ဖွင့်လှစ်ပေးခြင်းကို တစိုက် မတ်မတ် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိနေပြီး နှစ်ပေါင်း(၂၅) နှစ်ကျော် စီမံခန့်ခွဲမှုအပိုင်းတွင် အောင်မြင်ခဲ့ကြောင်း မှတ်တမ်း ရှိပါသည်။
5-9PM SLICE IT UP!
Half-meter pizza to share at 12,000 MMK
+ Free-flow beer at 6,000 MMK per person
မီတာတစ်ဝတ် ပီဇာကို ၁၂၀၀၀ ကျပ်
+ ဘီယာအဝသောက် ကို တစ်ယောက် ၆၀၀၀ ကျပ်
5-9PM R&B FEVER!
မျစားလို့ရတဲ့ ဝက်နံရိုးကင် ကို ၉၀၀၀ ကျပ်
5-10PM HELLO LADIES!
မိန်းကလေး လေးယောက်လာရင် အခမဲ့ စပါကလင်ဝင် တစ်ပုလင်း ရမယ့် အခွင့်အရေး
SIP ME ONE MORE TIME!
အပတ်စဉ် အသစ်ထွက်ရှိတဲ့ ကော့တေး တစ်ခွက် ၆၀၀၀ ကျပ်
သတ်မှတ်ရွေးချယ်ထားသော ကော့တေးနဲ့ ဝိုင် တစ်ခွက်ဝယ် တစ်ခွက်လက်ဆောင်
Executive Chef ရဲ့ Sunday Roast အထူး ဟင်းလျာများ၊2courses ကို ၂၅၀၀၀ ကျပ် ( သို့ )3courses ကို ၃၅၀၀၀ ကျပ်
Babett Set Lunch
2 courses နဲ့ ကော်ဖီ အချိုပွဲ အပါအဝင် အားလုံးပေါင်း ၁၂၀၀၀ ကျပ် + သတ်မှတ် ရွေးချယ်ထားသော ဝိုင် တစ်ခွက်ထပ်ပေါင်းရင် ၄၀၀၀ ကျပ်
Every Day SWEET DREAMS ARE MADE OF DESSERTS!
A-la-Carte အချိုပွဲများတွင် ၁၀% လျှော့ဈေးရရှိနိုင်ပါတယ်နော်။
MyFood Myanmar2020-09-01T09:02:14+06:30August 31st, 2020|စားသောက်ဖွယ်ရာများအကြောင်း - Food Stories, နိုင်ငံတကာ အစားအစာများ - International Food|